Juventus oo ku dhowaad 60 milyan oo gini hal maalin ka heshay iibinta funaanadda Ronaldo | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Juventus oo ku dhowaad 60 milyan oo gini hal maalin ka heshay...
Juventus oo ku dhowaad 60 milyan oo gini hal maalin ka heshay iibinta funaanadda Ronaldo
(Torino) 13 Luulyo 2018 – Laacibka Cristiano Ronaldo ayaa lagu wadaa inuu kusoo biiro kooxda Juventus oo soo bandhigi doonta 16-ka bishan.
Yeelkeede, waxay kooxda Juve durba dareemaysaa faa’iidada laacibka adduunka ee ay gacanta ku dhigtay, kaasoo aan kaliya faa’ido ciyaareed lahayne mid suuqna leh.
Tusaale ahaan, markii lagu dhawaaqay heshiiska CR7 ugu wareegay Juve ayaa isla hal maalin gudaheed waxaa laga iibsaday maaliyada 7 ee u xiran doono kooxdiisa cusub 520,000 oo funaanadood, qiime gaaraya 55.9 Milyan oo gini, hadde waa maalintii ugu horaysay!!!
Previous articleYuusan ku dan seejin nin durriyaddiisii dal fog gaystay!
Next articleKooxda Juventus oo shaacisay goorta ay soo bandhigayso CR7